Baarlamaanka Puntland oo meel-mariyay xeerka saxaafada Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo meel-mariyay xeerka saxaafada Puntland
December 6, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Xildhibaanada baarlamaanka dowladda Puntland . [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xildhibaanada baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Talaado ah meel mariyay xeerka suxufiyiinta Puntland.
Baarlamaanka oo ku jira kalafidhigooda 38-aad ayay maanta cod ugu qaadeen magaalada Garoowe xeerka saxaafada Puntland, iyagoo ka reebay dhowr qodob oo ay ururka warbaahinta Puntland iyo wariyeyaashu walaac ka muujiyeen.
Qodobada laga reebay waxaa kamid ah:
Horey xeerka waxaa loogu gudbiyay in wasaaradda warfaafinta Puntland bixinayso kaarka aqoonsiga wariyaha, balse hadda waxaa loo daayay guddiga warbaahinta.
2.Madax-banaanida guddiga warbaahinta
Xeerka ayaa markii hore lagu dhigay in guddiga warbaahinta Puntland hoggaamiso xukuumadda gaar ahaan wasaaradda warfaafinta, balse waxaa hadda loo madaxbaneeyay shaqadooda.
Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP, Faysal Khaliif Barre, oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyay meel marinta xeerka saxaafada, isagoo xusay in ay jiri doonaan imtixaan laga qaadi doono dhammaan suxufiyiinta Puntland, si loo helo wariyeyaal leh aqoon iyo xirfad sare.